मलेसियामा नयाँ कामदार लैजान रोकिएको हो ?
Wed, Feb 19, 2020 | 21:12:49 NST
सुन्दर घर्ती /रोल्पा
प्रश्न : मैले सुने अनुसार मलेसियामा नयाँ कामदार लैजान रोकिएको छ । के यो साँचो हो ?
उत्तर : तपाईंले सुनेको कुरा साँचो हो । मलेसियाका उपप्रधान एवं गृहमन्त्रीले नै नेपाली सहितका प्रवासी कामदार नलिने घोषणा नै गर्नुभएको छ । तर यो कति समयका लागि हो भन्ने कुरा तोकिएको छैन् । त्यसबारेमा हाम्रो संसदको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध तथा श्रम समितिले पनि यसबारेमा मलेसियासँग औपचारिक धारणा बुझेको थियो । त्यसपछि मलेसियामा रहेको अवैधानिक कामदार व्यवस्थापन पछि विदेशी कामदार लिने भन्ने कुरा आएको छ । तर कहिलेदेखि लिने भन्ने मिति चाहिँ तोकिएको छैन ।